MindNode waa bilaash wakhti kooban oo ah barnaamijka usbuuca | Wararka IPhone
MindNode bilaash ah wakhti kooban oo ah barnaamijka usbuuca
Haddana waxaan ka hadlaynaa codsi cusub oo bilaash ku noqonaya wakhti xaddidan. MindNode waxay ku leedahay qiimo joogto ah App Store-ka 9,99 euro, laakiin waqti xaddidan ayaa lagala soo bixi karaa gebi ahaanba bilaash. MindNode waa codsi loogu talagalay samaynta khariidadaha maskaxda iyada oo aan wax dhibaato ahi ka dhicin. Khariidadaha Maskaxdu waa matalaad muuqaal ah oo ku saabsan fikradahayada, fikradaha aan haysanno markaan diyaarinayno shaqo, mashruuc ama wax kasta oo u baahan urur sax ah. MindNode waxay kuu ogolaaneysaa inaad abaabusho, falanqeyso lana wadaagto fikradaheena si fudud oo caqli gal ah si aan kaliya xoogga ugu saarno fikrada. Codsigan ayaa ku habboon ardayda, farshaxanada, saxafiyiinta, kuwa sameeya dukumintiyada iyo maareeyayaasha mashruuca guud ahaan.
1 MindNode muuqaalada
1.1 Maskax-abuurka: barta laga bilaabayo
1.2 Abaabul: ka fikir waxyaabaha ku jira, maahan naqshad
1.3 La wadaag: fikradahaaga si fudud ugu gudbi
2 Faahfaahinta MindNode
Maskax-abuurka: barta laga bilaabayo
Hal far kaliya ku abuur fikrado.
Abuur dhammaan khariidadaha maskaxda ee aad rabto on shiraac si toos ah u koraya.
Abuur isku xirnaanta mawduucyada haddii kale go'doon noqon lahaa.
Kudar sawirro iyo istiikarada si aad u muujiso fikradahaaga.
Taageero VoiceOver oo buuxa, oo ay kujiraan dhaqdhaqaaqyo iyo astaamo kale oo marin loogu helo.
Abaabul: ka fikir waxyaabaha ku jira, maahan naqshad
Dib u diyaari fikradahaaga oo qari laamaha oo dhan si aadan u ilaawin fikradda.
Si otomatig ah u ilaali khariidadahaaga maanku adag oo lagu abaabulo Smart Layout.
Muuji noodhadh muhiim ah oo leh midabbo kala duwan, noocyo, iyo dhumucda dulucda.
Kudar qoraalo mowduucyada iyo tags isdhaafsiga si aad ugudarsato faahfaahin dheeri ah.
Si fudud u sahamiso khariidado waaweyn oo kakan oo leh aragtida dulmar ah.
Samee shaqo adigoo u rogaya noodhadh hawlo: burooyinka waalidku waxay muujin doonaan horumarkaaga.
La wadaag: fikradahaaga si fudud ugu gudbi
Ka soo gal khariidadaha maskaxdaada iPhone, iPad ama Mac mahad iCloud.
La wadaag dukumiintiyada is-dhexgalka ah si guud shabakadda adeegga cusub ee MyMindNode.
Kasoo deji khariidada maskaxdaada MindManager, FreeMind, OPML, Markdown, TaskPaper, CSV file, ama shaxda qoraalka.
Ku dhoofi maabka maskaxdaada PDF, FreeMind, OPML, PNG, Markdown, TaskPaper, CSV ama qaab qoraal ah.
Hawlaha u dhoofinta barnaamijka Xusuusinta Apple ama OmniFocus.
Cusboonaysiintii ugu dambeysay: 13-08.2016
Cabir: 20.1 MB
La jaan qaada Apple Watch
Lagu qiimeeyay da'da 4 iyo wixii ka weyn
Wada-noolaansho: Waxay u baahan tahay macruufka 8.4 ama ka dib. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » MindNode bilaash ah wakhti kooban oo ah barnaamijka usbuuca
Farshaxanadayaasha ka qeyb geli doona Apple Music Festival London ayaa horeyba loo ogaa